iPhone ayaa ku xirmay iCloud, ma la furi karaa? | Wararka IPhone
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato oo ku saabsan iCloud qufulka for iPhone
Miguel Hernández | | Wararka IPhone, iCloud, Casharrada iyo buugaagta
Mararka qaar shaki weligiis ah ayaa soo ifbaxa, ma karnaa fur iCloud? Tallaabadan amni ee ay Apple ku soo rogayso dhammaan qalabkeeda IOS tan iyo imaatinkeedii macruufka 7 oo si weyn ugu hagaagay macruufka 8, waxay nagu keeni kartaa dhibaatooyin badan haddii aynaan garanayn shaqooyinkeeda. Mabda 'ahaan, waa inay naga caawiso inaanan lumin qalabkeenna, ama ugu yaraan inaan ka dhigno gebi ahaanba marin-u-helid la'aanteed haddii ay si sharci-darro ah ku qaateen, hase yeeshe, si khaldan loo isticmaalay waxay sidoo kale noo horseedi kartaa xanaaq kale. T
e waxaan bari doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qufulka iCloud ee iPhone-kaaga, waxa uu yahay, sida looga hortago loona isticmaalo, iyo wixii ka sarreeya, sida looga saaro qufulka iCloud ee iPhone. Sidoo kale waa muhiim hubi in qalab uusan qufulan iCloud ka hor intaadan iibsan gacan labaad, markaa ha moogaan maqaalkan xiisaha leh.
Waxay ogaadaan hab lagu tirtiro koontada 'iCloud' oo aan lahayn lambarka sirta ah
Waxaan uga jawaabi doonnaa maqaalkan weyn dhammaan su'aalaha soo bixi kara iyo in ka badan, taasna waa inaanan kaliya u soo jiidan doonin liis muhiim ah wax kasta oo ku xeeran xayiraadda iCloud ee iPhone, laakiin sidoo kale waxaad noqon doontaa awood u leenahay inaan si firfircoon uga qaybqaato faallooyinka, sida had iyo jeerba, waxaan halkaa u joogi doonnaa inaan ka qaybgalno baahiyaha akhristayaashayada ku sugan Actualidad iPhone, iyadoo buugan isticmaalaha ballaaran oo fudud ee qufulka iCloud iyo gaar ahaan si aad u xalliso shakigaaga ku saabsan sida loo furo iCloud.
Aad ayey muhiim u tahay inaan sifiican u ogaanno talaabooyinkan iyo aaladaha ay Apple noo soo dhigtay, haddii aan ogaanno sida loogu isticmaalo dhammaan howlahaan si sax ah, waxaan u rogi doonnaa jawigayaga macruufka nidaam deegaan oo aad u ammaan badan, oo ay la socoto tallaabooyin taxane ah oo waxay noo oggolaan doontaa inaan kula noolaano teknoolojiyada cusub qaab fudud, innaga oo na badbaadin doona waxyaabaha na hor yaalla
Iyo wixii ka sarreeya, maxaa yeelay qof kastaa wuxuu u nugul yahay in qalabkiisa la xado, ama lumiyo jahwareer uun, markaa waa inaan ka faa'iideysanaa wax kasta oo Apple ay geliso meel aan ku gaari karno. Waxaan dhowaan ogaanay in xatooyada aaladaha iOS ay si aad ah hoos ugu dhacday Mareykanka Mareykanka tan iyo markii Apple ay ka hirgelisay tallaabadan amniga ah.
1 IPhone-ka waxaa xiray iCloud?
2 Sideen ku ogaadaa oo u xiraa qalabkeyga iCloud
3 Sida looga fogaado iibsashada iPhone-ka uu qufulo iCloud
4 Sida loo ogaado haddii iPhone uu qufulan yahay iCloud
5 Sida loo demiyo qufulka iCloud ee iPhone
6 Qufulka iCloud ma laga saari karaa iyada oo loo marayo JAILBREAK?
IPhone-ka waxaa xiray iCloud?
Inkasta oo barxadku yahay iCloud, maaddaama ay wax walba ku dhex socdaan daruuraha, nidaamka waxaa dhab ahaan loo yaqaan "Raadi My iPhone shaqeyn Lock". Marka aan indhaha ka qarsanno qalabkeenna macruufka ah, waxaan ka faa'iideysan karnaa hawsha "qufulka firfircoonaanta" Raadi iPhone-kayga si looga hortago cid kale inay adeegsato aaladaha iOS, oo ay ku jiraan iPhone, ha lumeen ama ha la xaday. In kasta oo aaladda macruufka ah ay sii kordheyso marin-u-helkeeda maaddaama ku dhowaad dhammaantood ay ku jiraan tikniyoolajiyadda TouchID, ma xuma in la awoodo helitaanka iyo xannibidda qalabkeenna haddii ay ku jiraan macluumaad shakhsiyeed ama xasaasi ah, amniga ayaa had iyo jeer ahaa mid ka mid ah mudnaanta Apple.
Qufulkani si otomaatig ah ayuu u shaqeeyaa on qalab kasta oo macruufka ka macruufka 7, oo kaliya noo oggolaan mayso in aan meel fog ka xirno aaladda, marka lagu daro helitaankeeda, laakiin waxay ka hortageysaa marin u helidda iyo tirtiridda xogta ay qalabka macruufka ah ama iPhone-ka laga hadlayo ay leeyihiin, maadaama si loo helo, ama dib u soo celi, waxaan u baahan doonaa si aan sax ahayn xuduudaha marin u helka. Marka, haddii aan dooneyno inaan soo celinno qalab, waa inaan leenahay shaqada Raadi iPhone-kayga furey, tanna waa inaan ogaannaa Aqoonsiga Apple ee ku xiran qalabka. Sidoo kale, haddii aan dooneyno inaan bilowno qalab la xiriira Aqoonsiga Apple dib u soo celintiisa ka dib, waa inaan galnaa erayga sirta ah ee Apple ID ee qalabka ku xiran yahay.
Shaqadani waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta aaladda, gaar ahaan markii la xado, iyadoo si weyn u kordhineysa fursadaha soo kabashadiisa. Waxaan xusuusan nahay in xitaa haddii aalad la qaabeeyey, ay si aan macquul ahayn ugu xirnaan karto aqoonsi Apple ahSidaa darteed, waxay noqon doontaa mid la raad raaci karo, oo cidina ma awoodi doonto inay dib u hawlgeliso aaladdaas adiga oo aan oggolaanin. Tiknoolajiyaddan kuma koobna iPhone, iPad iyo iPod Touch, laakiin Apple Watch sidoo kale waxay leedahay qufulka firfircoonida.
Haddii aad rabto ogow haddii iPhone uu qufulan yahay iCloudAdigoo buuxinaya foomka soo socda waxaad kuheli doontaa dhamaan faahfaahinta e-maylkaaga, wax muhiim u ah inaad iska ilaaliso inaad iibsato mobiil la xaday ama milkiilihiisii ​​lumiyay oo qufulka iCloud dhigay.
Sideen ku ogaadaa oo u xiraa qalabkeyga iCloud
Ereyga laftiisa ayaa sheegaya, iCloud ayaa fure u ah, si aan u xakameyno waxaan u baahan doonaa oo kaliya isku xirnaanta internetka, Apple waxay na siisaa qalab aan lagama maarmaan ahayn, daruurta. Waa inaan galnaa shabakada iCloud, illaa iyo inta aan hayno Raadi taleefankayga Iphone dabcan waa la shaqeysiiyay, halkaasna, waxaan ka heli karnaa dhammaan beddellada loo heli karo nidaamkan amniga. Websaydhku ma noqon karo wax aan ka ahayn "www.icloud.com", halkaas oo aynaan ka helin oo keliya qaybta xafiiska Apple (Bogagga, Lambarada iyo Muhiimka), marka lagu daro emaylka iyo iswaafajinta sawirrada otomaatiga ah, iyo hawlo kale oo badan, laakiin sidoo kale waxaan leenahay Raadi, qalab si sax ah u leh isla astaanta Raadi iPhone-kayga, sidaa darteed wax khasaaro ah kuma lihid
Si aan u galno iCloud, mar labaad, waxaan u baahan doonnaa e-maylkeenna iyo erayga sirta ah ee ku xiran Aqoonsiga Apple, taas oo ah, koontada Apple ee aan si aaminnimo leh ugu xirnay iPhone-keena. Markaan gujino astaanta, nidaamku wuxuu markale codsan doonaa koontada, si loo xaqiijiyo inaan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee qalabka in la baaro. Markaan galno erayga sirta ah, nidaamku wuxuu qaadanayaa dhowr ilbiriqsi si uu si sax ah uga helo khariidadaha Apple, meesha saxda ah ee qalabku yaalo.
Halkaas, waxaan ka helnaa dhammaan qalabkayaga liiska ku qoran, ugu yaraan dhammaan kuwa la xiriira Aqoonsigeenna Apple, laakiin haddii aan nahay maamule koox Qoys ahaan iCloud, waxaan sidoo kale heli karnaa inta ka dhiman aaladaha Apple ee ku jira kooxdaas. Markaan dooranno qalab gaar ah, waxaan isla markiiba ka heli karnaa goobtiisa, waxay sidoo kale tilmaamaysaa waxa batteriga hadda ee qalabku yahay, waxayna noo oggolaaneysaa inaan qabanno saddex ikhtiyaar:
Siidaynta Sonido: Si aad u hesho iPhone-ka haddii aan ku weyney guriga
Bilow hab lumay: Waxay na weydiin doontaa lambar taleefan oo si otomaatig ah loogu soo bandhigi doono shaashadda iPhone-ka, sidaas darteed qofkii helaa wuu heli karaa wuuna noo soo celin karaa, hadday doonaan.
Tirtir iPhone: Haddii aan baqeyno oo qalabkeenu uu hayo macluumaad xasaasi ah, masaxid fog oo qalabka ah ayaa la sameyn doonaa.
Sida looga fogaado iibsashada iPhone-ka uu qufulo iCloud
Markii aan iibsano qalab gacan labaad ah oo iPhone ah, su'aashan ayaa si dhakhso leh u soo baxaysa «Sideen uga fogaan karaa in la iibiyo qalab la xaday, ama aan ku xirto iCloud?«Sidaa darteed, waa inaan hubinno in qalabkan aan dooneyno inaan helno horay loo tirtiray oo uusan ku xirnayn wax akoon aqoonsi Apple ah horay. Tani waxay ku dhici kartaa laba sababood, in iPhone la xaday, ama in milkiilaha iPhone, oo isna ah iibiyaha, uusan ka warqabin faa'iidooyinka qufulka iCloud isla markaana uusan horay u furin qalabka.
Ugu dambeyntiina, Apple waxay baytariyada ku dhejisay macaamilkan noocan ah, si looga fogaadona, way shaqeysay aalad webka ah oo noo oggolaan doonta inaan ku ogaanno habka ugu fudud haddii qalab xiran yahay iyo haddii kale, ama ugu yaraan haddii aad leedahay qufulka dhaqaajiso on. Waxyaabaha xun ayaa ah in qalabkani la waayey oo hadda waa inaad isticmaashaa habab kale sida midka aan hoos ku soo jeedineyno taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato haddii ay tahay inaad furto iCloud on iPhone gaar ah:
Quful hubinta qalab by iCloud.
Waxaa muhiim ah in la ogaado xaaladda gacanta labaad ee iPhone ee aan dooneyno inaan marin u helno. IPhone-ka, qiimihiisa sare awgiis, waa badeecad wax badan isku dhiibta suuqa gacan labaad, sidoo kale waa badeecad qiimo aad u yar leh haddii aan barbar dhigno tartanka, sidaa darteed suuqa waxaa ku badan aaladaha iPhone-ka. , taasi waa sababta, Waa inaan si otomaatig ah uga cabsanaa iPhone kasta oo aan u aragno iibinta gacan labaad, marka qiimaha uu si cad uga hooseeyo waxa aan ka heli karno inta ka hartay xayeysiinta. Helitaanka qalab iPhone ah oo ku xiran akoon kale oo Apple ID ah waa lacag lumis, maadaama haddii ay firfircoon tahay, xitaa ma awoodi doonno inaan soo iibsanno codsiyo cusub, haddii ay tahay inaan soo celinno, weligeen awood uma yeelan doonno inaan bilowno waa Intaas waxaa sii dheer in IPhone si buuxda ayaa loo ogaan karaa, sidaa darteed waxaan cuni karnaa bunni sharci weyn leh Haddii aan helno IPhone-ka qof kale iska leeyahay, taasi waa sababta aan ugu qasbanaanayno inaan kumanaan indhood ku soconno helitaanka gacanta labaad ee iPhone.
Sida loo ogaado haddii iPhone uu qufulan yahay iCloud
Si kastaba ha noqotee, marwalba halkan kuma imaan karno, ama waqti uma heyno. Haddii aan ku dhexjirno macaamil ganacsi, waxaan si fudud u hubin karnaa in qalabku ku xiran yahay Apple ID iyo in kale, sidaa darteedna, gebi ahaanba waa wax aan annaga shaqsi ahaan noo faa iidaysan. Marka, waxaan ku tusineynaa laba qaab oo aad ku hubiso haddii iPhone uu leeyahay Lock Furaha ama qufulka iCloud haddii aan adeegsan karin habka xaqiijinta Apple ee aan horey u soo aragnay:
Qaabka 1: Waxaan daminaa IPhone-ka oo aan markale daarnaa, hadii shaashadda qufulka ay ka muuqato shaashadda guriga oo ay na weydiiso lambar, waa sababta oo ah in iPhone-ka aan laga tirtirin oo aan laga jarin aqoonsiga Apple ee u dhigma.
Qaabka 2: Haddii aan helno iPhone dib loo soo celiyey, oo sidaas darteed ay ku jirto habka qaabeynta, waa inaan ku hormareynaa, illaa daqiiqad markay na weydiin doonto lambarka sirta ah ee Apple ID ee uu ku xiran yahay, haddii ay dhacdo, iPhone waa sidoo kale ku xiran Aqoonsiga Apple, sidaa darteedna, annaga ma lahaan karno.
Sidaa darteed, annaga oo raacayna labadan hab ee fudud, waxaan ka hortagi karnaa oo keliya wax isdabamarin, laakiin sidoo kale waxaan dhexdhexaadin ka sameyn karnaa nidaamka macaamil ee aaladaha la xaday, waana wax gebi ahaanba sharci darro ah Ka-hortagga ayaa ka wanaagsan daawaynta, oo markay timaaddo qufulooyinka iPhone iPhone, weligood waxba ma yeeli doonaan.
Sida loo demiyo qufulka iCloud ee iPhone
Tallaabadan nabadgelyadu waa mid dhameystiran, taas oo ah, innaga ayaa ah kuwa go'aansada in la hawlgeliyo iyo in kale Intaas oo dhan, Apple waxay na siineysaa cashar wanaagsan, sidaa darteed waan joojin karnaa markii aan rabno.
Haddii aad ku lamaanisay Apple Watch-ka iPhone-gaaga, kala-bixi Apple Watch.
Samee hal keydinta laga bilaabo qalabka macruufka.
Taabo Settings> iCloud. Hoos udhaabo oo taabo Saxeex ka bax. In macruufka 7 ama ka hor, tuubada account saar.
Tubada Saxeex markale, ka dibna taabo Ka saar iPhone oo gal lambarka sirta ah.
Ku noqo Settings oo taabo Guud> Dib u dejinta > Tirtir waxa ku jira iyo dejinta. Haddii aad daartay Raadi My iPhone, waxaad u baahan kartaa inaad gasho aqoonsigaaga Apple iyo lambarka sirta ah.
Haddii lagu weydiiyo lambarka qalabka ama nambarka xaddidaadda, geli. Kadib taabo masiirka [qalab].
La xiriir hawlwadeenkaaga si uu kaaga caawiyo inaad adeegga ugu wareejiso milkiile cusub. Hadaadan isticmaalin kaarka SIM-ka ee aaladda, sidoo kale waad la xiriiri kartaa si uu kaaga caawiyo ku wareejinta adeegga milkiile cusub.
Qufulka iCloud ma laga saari karaa iyada oo loo marayo JAILBREAK?
Jawaabta cad waa mayaMa dooneyno inaan ogaano ama wadaagno macluumaadkaas. Haddii aad u baahato baahi kasta fur iCloud Qalab si sharci ah adigu iska leh, Apple waxay leedahay adeeg taleefan oo mas'uul ka noqon doona inuu ku siiyo xal deg deg ah ka dib marka la xaqiijiyo aqoonsigaaga iyo lahaanshahaaga. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku xusuusineynaa in fiidiyowyo iyo casharro badan oo la sameeyo oo aad ku aragto khadka tooska ah ay yihiin khiyaanooyin fudud, oo ay u badan tahay inaad ku lumiso waqti iyo lacag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato oo ku saabsan iCloud qufulka for iPhone
Macluumaad yar oo ku saabsan…, taas waad u aragtaa buugga waana intaas.
Haddii marka weydiinta la samaynayo ay i tusayso in qufulka firfircoonaanta iPhone-ka la xidhay, maxaan sameeyaa si aan u hawlgeliyo?
Fadlan i caawi waa in iPhone-keyga uu ku xiran yahay icloud oo aanan furi karin sideen noqon karaa?
aad u xiiso badan sharaxaaddaada
Waxaan haystaa gacan labaad iphone 4s icloud-ka ayaa xanniban! Haddii aan furo, miyaa loo hayaa in loo isticmaalo ipod ahaan?
Ku jawaab vero
CARDENAS ROMEL dijo
Wanaagsan, IPHONE MA LOO XIRIIRI KARAA KELIYA ICLOUD HADDII APP AY HELO IPHONE MAY SHAQAYNAYN?
Ku jawaab ROMEL CARDENAS
maya, macquul maahan in sidaa la sameeyo hadii shaqadan aan la hawl galin.
Waxaan hayaa iPhone 6s la helay maxaan sameeyaa
Jawaab ku sii Yoendy Munoz Bravo
Waad salaaman tihiin, waxaan gabdhahayga u iibsaday 2 iphone ee waqooyiga ireland. Midkoodna wax dhibaato ah ma qabin, laakiin tan kale, markii la qaabeynayo, iima oggola in aan rakibo nidaamka qalliinka, waxay ii sheegeen in aan u baahan yahay kaar sim ah shirkadda asalka ah, oo ah EE, laakiin halkan Buenos Aires ma dono wax sim ah ha ka helin shirkaddaas. Ma jiraa qof garanaya sida aan u buuxin karo nidaamka qalliinka? Iima weydiineyso wax fure ah ama fure iCloud ah, marka ugu yaraan waan ku kalsoonahay inaysan i xannibin. Waxaan la hadlay dadka Iphone-ka waxayna ii sheegeen inaysan ku jirin koox xun. Kaliya waxaan ubaahanahay in aan kiciyo .... FADLAN, QOF I TUSAN SIDA LOO SAMEEYO. Waxaan doorbidayaa in ugu yaraan ay ii adeegto si aan u dhagaysto muusikada oo aan ugu isticmaalo kiniin ahaan ... si fiican, gabadhaydu way doorbidaa. Salaan iyo mahadsanid.
Waxaan hayaa iPhone 5s waxaana ku xiraya icloud mana aqaano erayga sirta ah ee ay i siiyeen qofkaasina ma garanayo erayga sirta ah ama wax aanan garanayn haddii ay leeyihiin abaabul ay ku isticmaali karaan unuggu waa cusub yahay
Ku jawaab Tatiana garcia
Haddii ay xannibantahay iCloud, fadlan soo celi, oo laga yaabo in la xaday.
Jawaab Mariela Araya Castillo
Waxaan iibsaday Iphone 6 ebay, laakiin ka dib markii aan isku dayay inaan isticmaalo, waxay igu yiraahdaan Macservice Chile waxay xireysaa T-mobile, ma jirto shirkad noocaan ah halkan, waxaa lagu furi karaa iyada oo xabsiga laga dhigo.
Waan ku faraxsanahay haddii aad macluumaad iigu soo diri karto emaylkayga.
Waa salaaman tahay waxaan haystaa iPhone 7 oo lagu daray waxaan ku iibsaday Mexico hadda waxaan ku haystaa Peru waxay ii soo baxday in IDD la xidhiidha la helay, sida anigu ma xasuusto ma awoodo inaan furo laakiin waxaan ahay milkiilaha aan iibsaday waxay ku jirtaa dukaanka tufaaxa waxoogaa caawimaad ah iyo ñapa emayllada ma rabaan inay iiga furaan gobol ahaan, sababtoo ah ma joogo Mexico hal carsaanyo oo dhan tan iphone ah,
Ku jawaab iris
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa iPhone 5s, horeyba waan u iibsaday bilawgii markii aan aaday halka ay ku iibiyaan telefonada gacanta iyo markaan arkay taleefanka gacanta wax walba way hagaagsanaayeen waana hubiyay waqtigaas kaamerada wax walba iyo taleefanka gacanta taleefanka wax walba way hagaagsanaayeen waxayna ahayd adeegsiga nuska taleefanka gacanta laakiin markii aan iibsaday ka dib waxaan imid gurigeyga iphone-ka waxaa laga xayiray icloud kumana furi karo sababta oo ah iimayl ayuu ka heystaa milkiilaha sideen u tirtiri karaa, qaar badan ayaa sheegaya aniga in aan la tirtiri karin oo ay sii ahaato ipod, qof ayaa ii sheegi kara waxaan dhahayaa hadii ay qasab tahay in la helo xal xayiraya icloud oo aan horeyba rajo uga qabay waxbadan usbuucan si aan u furo, waxaan sameeyay isku dayo badan oo aan ku furo Waxba ma qaban karo waxaan u baahanahay kaalmadaada
Waxaan ka imid MEXICO, MEXICO CITY haddii qof i caawiyo waan ku qanacsanahay.
Ku jawaab ERIC
Ciise Vazquez dijo
Waad salaaman tihiin, waxaan ka soo ceshay iphone (boliiska) oo la iga xaday maalintii shalay. Hagaag, in kasta oo qaansheegta magacayga lagu haysto, oo leh lambarka IMEI-ka ee taleefanka, cabashada meesha taleefanka sidoo kale lagu aqoonsaday IMEI-keeda. Qofka karti badan leh ee aan iskudayo inuu furo terminal-ka wuu aqoonsan yahay wuxuuna ii ogaysiinayaa in terminalku runtii yahay hantidayda. FARIINTA AY II SOO ​​JAWAABAyaan AYAA LEEYAHAY IN AAN KU FILAN LOO CADAYN IN AY TAHAY MINE "ole, ole and ole".
Mudanayaashan ka socda APPLE iyo ICLOUD waxay u dejiyeen si haddii sababo jira awgood uu burburo terminal-kaaga oo aad ugu baahato inaad u marto habraacii la aasaasay, waxaad garwaaqsanaysaa inaadan mar dambe haysan taleefan ee aad tahay warqad miisaan leh, iyo haddii aad rabto ku noqo si aad u haysato iPhone waa inaad mar kale sanduuqa dhex martaa.
Ku jawaab Ciise Vázquez
Waxaan soo iibsaday iphone 6 wax walbana si fiican ayey ugu shaqeeyaan sim cardkayga iyo akoonkeyga ID ee iTunes laakiin wuxuu leeyahay akoon icloud ah oo aanan heli karin sababtoo ah wuxuu i weydiiyaa lambar sir ah laakiin taasi ma saameynayso howlgalka taleefanka, marka laga reebo goorta calaamad yar ayaa soo baxda oo leh aniga ayaa furaha furahayga furaya laakiin gelinta "maahan hadda" waa horeba. Ma jirtaa wax suurtagal ah oo ay aniga ila socon karaan ama in sawirrada taleefanka lagu muujin karo astaanta koontada la xidhiidha?
Ku jawaab marcela
Waxaan kaliya ka xaday iPhone 8 Mexico. Waxaan kuu sheegayaa inaysan macquul ahayn in laga furo koontada 'iCloud', mid ayaa kaliya dhaqaajinaya qaabka lumay isla markaana isla marka taleefanka la geliyo SIM ama uu ku xirnaado shabakad, goobtiisa ayaa la heli doonaa. Xaaladdayda waxay soo saareen SIM-kayga waxayna ku dhejiyeen taleefan kale si ay ugu helaan xiriiro halkaas ku kaydsan, habkaas waxay isku dayeen inay igu khiyaaneeyaan bogag been abuur ah oo iska dhigaya inay ka yimaadeen Apple halkaas oo ay ku weydiistaan ​​aqoonsi iyo erey sir ah. 7 maalmood ayaa laga soo gudbay, sida iska cad waxaan horeyba uga soo helay lambarkeyga SIM kale ilaa maantana wali waxaan helaa fariimo ka imanaya bogag been ah oo isku dayaya inaan helo aqoonsigeyga iyo furaheyga Ka sokow taas waxaan horey u helay dhowr emayl oo ka socda Apple oo diraya goobta aaladda, taas oo ku taal cinwaan gaar ah oo ku yaal xaafad aan ammaan ahayn ... Ugu yaraan waan ku faraxsanahay inaan ogaado inaysan waligood awoodi doonin inay isticmaalaan taleefankayga la xaday. Mudanayaalna haddii maalin uun ay kugu dhacdo, ka taxaddar meesha aad dhigayso xisaabtaada dhawaaqa loud. maadaama sida kaliya ee ay ka furi karaan ay tahay inay maareeyaan si ay u khiyaaneeyaan si ay xogtooda ugu dhigaan bog been ah.
Telefoon xatooyo Grand dijo
Waxaan xaday taleefanka gacanta, sidee baan ufuri karaa si aan si qaali ah ugu iibin karo? : v
Ku jawaab taleefanka xatooyada ee Grand
Waad salaaman tahay saaxiib, sidee wax u raadineysaa waxaan ka iibsaday milkiilaha iphone 6, kaas oo iphone uu ku leeyahay akoon icloud ah oo ay iska leedahay gabadha mulkiilaha ah, kaas oo aan haysto emaylka iyo lambarka sirta ah, laakiin markaan galo waxaan helayaa in akoonka uu ahaa xannibay sababo ammaan awgood oo aanan marin u helin sababta oo ah waxay i weydiinaysaa lambar aan u dirayo emaylkiisa ama lambarkiisa si fiican aabbaha iyo gabadhiisu waxay leeyihiin dhibaatooyin qoys oo milkiiluhu uusan weydiisan karin koontada tufaaxa su'aashaydu waa; Ma jirtaa wado lagu galo iCloud-kaaga anigoon ogeyn su'aalaha amniga ama emaylkaaga ama ay jirto wado loo maro milkiilaha shirkadda mobilada oo loo sii daayo "ka noqo" iCloud-kaaga? Wax qiimo ah ma ku lahaan lahayd? IN PERU
Jawaab jose armando chirinos anaya
Waxaad tahay dameer Hindi ah
Germán oo u dhashay dalka Kolombiya. dijo
Salaan. Mudanayaal, kuwa daneeya amniga waxay daneynayaan inay ogaadaan haddii ay dhacdo in lumiso ay suurta gal tahay iyaga inay furaan oo qaataan xogteenna. Anigu waxaan ahay isticmaale Android ah, waxaan haystay Galaxy Note 5 oo xidid ah waxaana ii soo baxday in markii taleefanka laga soo celiyey warshaddii ay haysay xogta, waa wax culus. Hadda oo leh Galaxy J8 iyada oo aan wax ka beddelin markii dib loo soo celinayo, waxay i weydiineysaa koontada google. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qufulka iCloud uu yahay mid la isku halleyn karo iyo in kale maadaama aan qorsheynayo inaan iibsado 6S. Waxaan u maleynayaa in amniga la ilaalinayo ilaa inta taleefanka uu sii haayo software-ka ama la cusbooneysiiyo miyay ku tiirsan tahay qalabka amniga ee dheeraadka ah ee qalab kasta maxaa yeelay waa dhawaa?
Jawaab Germán ka Colombia.
In kasta oo 100% amniga uusan jirin, qufulka iCloud ayaa ka hortagaya qof inuu dib u soo celiyo aaladdaada adigoon haysan rukhsaddaada iyo soo kabashada xogtaada, xitaa ma aysan ku habeyn karin kooda, maxaa yeelay waa inaad marka hore soo gashid magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah.
dhiiga RR dijo
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, aan wadaago… waxaan iibsaday ipad 2 adiguna waxaad leedahay akoonka icloud, iska cad ipad waa in la xado laakiin akoonka icloud mar horaba waa la sii daayay laakiin kama tirtiri karo ipad, su'aashaydu waxay tahay hadaad taas ka saari karto koontada oo dhammeystiran laakiin loo adeegsado qaar ka mid ah khawano sida JAILBILA oo aan dib loo dhigin maxaa yeelay waan ogahay in la xannibi doono mahadsanid dhammaan.
Jawaab ku siiya RR
Waxay iiga iibiyeen iPhone ay xireen icloud mana aqaan waxa aan ku sameeyo taleefanka gacanta.
Betasyada ugu horreeya ee OS X 10.11.6 iyo tvOS 9.2.2 sidoo kale way yimaadaan
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee iOS 9.3.3